बिहेको मुखमा बेहुलाका बाबुले बेहुलीकी आमा भ’गाइदिएपछि…गाउँ भरि नै खैलाबैला ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/बिहेको मुखमा बेहुलाका बाबुले बेहुलीकी आमा भ’गाइदिएपछि…गाउँ भरि नै खैलाबैला !
काठमाडौं। भनिन्छ, प्रेम अन्धो हुन्छ । तर, कति अन्धो हुन्छ यो भने बुझ्न सकिएको छैन । प्रेम जवानीमै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । प्रेम कुनै पनि उमेरमा हुन सक्छ । तर, स्थिति त्यतिबेला अप्ठ्यारो बन्छ जब हुनेवाला बेहुलाका पिताले हुनेवाली बेहुलीकी आमा भ’गाइदिन्छन् । यस्तो घ’टना भारतको गुजरातको सूरत जिल्लामा भएको आज तकले लेखेको छ ।
यहाँ फेब्रुअरीमा एक जोडीको बिहे हुनेवाला थियो । तर, बिहेभन्दा पहिल्यै बेहुलाका पिताले बेहुलीकी आमा भगाइदिए । घ’टनापछि दुवै परिवारमा वि’वादसमेत भएको छ । हुनेवाला जोडीको विवाह तो’डिएको छ । दुवै परिवारका अनुसार बेहुलाका पिता र बेहुलीकी आमाबीच पहिल्यैदेखि चिनजान थियो । अब दुवै परिवारले उनीहरुले बिहे गरिसकेको हुन सक्ने आ’शंका गरेका छन् ।
सूरतको काटरगामका युवकको बिहे नवसारीकी युवतीसँग हुनेवाला थियो । पुलिसका अनुसार बिहेको ठिक एक महिना अगाडि बेहुलीकी आमा घरबाट बे’पत्ता भइन् । धेरै खोज्दा पनि नभेटेपछि परिवारले पुलिसमा गएर बे’पत्ता भएको रिपोर्ट लेखाए । जाँचमा बेहुलाका पिता पनि त्यही दिनदेखि बे’पत्ता भएको खुलासा भयो । भागेका दुवै अहिलेसम्म भेटिएका छैनन् । पुलिसमा रिपोर्ट गरेको १० दिन पछि दुवै परिवारले हुनेवाला वैवाहिक सम्बन्ध तोडे । यी दुईको विवाह १ वर्ष पहिले तय भएको थियो ।